Trec - Soavaly Noti | Soavaly Noti
Fitsipika iray hafa izay hitantsika ny tontolo soavaly dia ny trec, na inona no teknika mitovy amin'ny zotra mpitaingina mpifaninana. Fifehezana io tany Frantsa no niandohany telopolo taona lasa izay ary heverina fa izany rehetra izany andian-tafika mpitaingin-tsoavaly tsy maintsy manana ny fahaizana mandrafitra ny trec ianao.
Ny fitsapana dia manisa miaraka amin'ny faritra samihafa toy ny orientation ary ny fitiliana tsy tapaka na ny sakana ankoatry ny safidy hafa. Ho hitanao daholo izy ireo ary betsaka kokoa amin'ity habaka ity hahafantaranao azy ireo bebe kokoa ary hahafantatra tsara izay misy an'io fanatanjahantena trec io. Ankoatry ny torohevitra, fifaninanana ary antsipiriany hafa hankafizanao tanteraka ity fanatanjahantena ity.
Ny soavaly sy ny fifandraisana amin'ny olombelona
Alohan'ny hanatonana biby hafa dia mijery azy ilay soavaly, mamorona toerana sy elanelana. Ny olombelona amin'ny natiora dia manakaiky kokoa ...
Ny kalitaon'ny karazany Berber dia fantatra amin'ny anarana hoe soavaly efitra, nanomboka tamin'ny alàlan'ny ...